हेर्नुहोस् , इटहरीका ऋषि धमलालाई मेयर चौधरीको खरो जवाफ (भिडियो सहित) – Kavreonline
काठमाडौ । इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरीका कारण अहिले नेपाली समाजमा एउटा बहस छेडिएको छ । गतल प्रवृत्तिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने वा कानुनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर बहस शुरु भएको छ । मेयर चौधरीले गर्न चाहेको सुशासनको विषयलाई सबैले प्रशंसा गरेका छन् । तर, उहाको प्रवृत्तिलाई भने गलत मानिएको छ ।
उनले भनेका छन्, ‘आफ्ना भनाइप्रति सार्वजनिक रुपमा आत्मलोचना गरी पदीय गरिमा र पार्टीको प्रतिष्ठाप्रति सचेत रहन मेयर द्धारिकालाल चौधरीलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु । हेर्नुहोस् प्राइम टेलिभिजनले गरेको कुराकानी ….
यसकारण फोन गरेरै आइजीपी सर्वेन्द्र खनालले दिए गायक प्रकाश सपुतलाई बधाइ !
भद्रगोलमा बलेकाे वावा रियलमा यस्ता छन् ! हिराेइन जस्ती श्रीमति भएका सितेबा करोडौंको मालिक भएको खुलाशा (भिडियो हेर्नुस)